မြန်မာပြည် မြေပုံရေးဆွဲသူ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည် – CharTake
chartake | January 26, 2021 | KNOWLEDGE | No Comments
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပထဝီဝင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည် ( မြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှ နိုင်ငံရပ်ခြား ပါရဂူဘွဲ့ကို ပထမဦးဆုံး ဆွတ်ခူးခဲ့သူ)
၁။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်သင်းကြည်ကို မြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားက ပါရဂူဘွဲ့ ယူလာသူအဖြစ်သိ သူများပါတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကလပ်တက္ကသိုလ်မှာ ပထဝီဘာ သာနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မဖြစ်ခင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးတွေလန်ဒန်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ သွားယူကြတာတွေရှိပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေထဲကတော့ ဒေါ်သင်းကြည်က ပထမဆုံးပါ။
၂။ နောက် ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာက လက်ခံ သုံးစွဲနေတဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ အမ္စတာဒမ္ကဂျမ်ဘာတန်ပထဝီ မြေပုံဆွဲဌာနနဲ့ အတူကြီးကြပ်ရေးဆွဲ တည်းဖြတ်ခဲ့သူပါ။
၃။ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်ကို ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ ဇြန္လ ၁ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် တောင်ငူမြို့၌ အဖဦးကြို့၊အမိ ဒေါ်မြတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း သုံးဦး ရှိပါတယ်။
၄။ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်ဟာ ရေတာရှည်မြို့၊ ဗမာတိုင်း ရင်းသား ဘာသာကျောင်းတွင် စတင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ဖခင်ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော မကွေးမြို့ ၊ တိုင်းရင်းမြန်မာ မြူနီစီပယ်ကျောင်းတွင် ရှစ်တန်းအထိ ပညာသင်ယူ ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆရာဖြစ်သင် ကောလိပ်ကျောင်း (Teacher Training College -TTC) တွင် နဝမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းအောင်တဲ့အထိ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားဖြင့် နေထိုင်ပညာ ဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ်)(High School Final – HSF))ကို ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကျောင်းသူများထဲတွင် ပထမ ရရွိခဲ့သူပါ။
၁၉၃၄-၁၉၃၅ ပညာသင်နှစ်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ စတင် တက်ရောက်ရာ (S)တန်း (Special Class)တွင် သင်ယူခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၃၈ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးတန်း (B.A. (Hons.)) ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ ပထဝီဝင်ဌာနတွင် အချိန်ပြည့် နည်းပြဆရာမ အဖြစ် နိုင်ငံတာဝန်ကို စတင် ထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၉-၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ဆရာဖြစ်သင် ကောလိပ်(TTC)မွ B.Ed. (ပညာရေးဘွဲ့) သင်တန်းကို တက် ရောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ခေတ်အတွင်း ၁၉၄၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင် အရှေ့အာရှလူငယ် အစည်းအရုံးက ဖွင့်လှစ် သော လက်ရွေးစင်ကျောင်းတွင် သင်ရိုးညွှန်း တမ်းဆိုင်ရာနှင့်သင်ကြားမှု ဆိုင်ရာများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီးဦးဖေမောင် တင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ပထ ဝီဝင်ဌာန၊ လက်ထောက် ကထိကအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်ကာလ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ ပထဝီဝင်ဌာနကို လက်ထောက် ကထိကအဆင့်ဖြင့် ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ(USA)၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ကလပ်တက္ကသိုလ်(Clark University) တွင် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရယူရန် ထွက် ခွာခဲ့ပြီး ပထမနှစ်ဝက် ရမှတ်များ ထူးချွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းတက်ရန် ကလပ်တက္ကသိုလ်ကခွင့်ပြု ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပါရဂူဘွဲ့ရှိခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလတွင်မြန်မာပြည်ကို သင်္ဘောနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ ရပ်ခြား ပါရဂူဘွဲ့ကို မြန်မာအမျိုးသမီးများ ထဲမှ ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပထဝီဝင် ဌာန၌ ကထိက / ဌာနမှူးအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၉ ရက် မှစတင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပထဝီဝင် ဌာန၌ ပါမောက္ခအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်း (Burma Research Society-BRS) တွင်ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင် လှုပ် ရွားခဲ့သလိုကိုယ်ပိုင် သုတေသနလုပ်ငန်း များကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် နိုင်ငံသမိုင်း ကော်မရှင်(HistoricalCommission)မှာလည်းတက်တက်ကြွ ကြွ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အနုပညာအသင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ခြေလျင်နှင့်တောင် တက်အသင်းတို့ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ရာမှာလည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကတက္က သိုလ် စာပေး စာယူသင်တန်းများ (ပညာရေးဘွဲ့)စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဝိဇ္ဇာ/ သိပ္ပံ၊ ဘောဂဗေဒနှင့်ဥပေဒ ပညာရပ္မ်ားပါ ထည့်သွင်းပို့ချခဲ့ရာတွင် ဝိဇ္ဇာဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
၅ ။ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဇြန္လမွာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပထဝီဝင်ပါမောက္ခတာဝန်မှ သက်ပြည့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်း၊ ၇ မိုင် နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ပါတယ်။ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်သင်းကြည်က ” ပထဝီသင်ကြားခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လူငယ်လူရွယ်တွေကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာ စူးစမ်းတတ်တဲ့ အလေ့အထ ရရွိဖို့ ပျိုးထောင်ပေးတာ ဖြစ်တယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ Crd